သဘောင်္တင်ခ - ကျောက်မျက်ရတနာဆိုင်
main site ကို
လှည်း / €0,00 0
ဖနွမ်းပင် & စီရမ်ရိရိ, ကမ္ဘောဒီးယားမှအခမဲ့ပို့ဆောင်မှု
သဘောင်္တင်ခထုတ်ဖော်ပြောဆို - အမေရိကန်ဒေါ်လာ 35
Express ကိုတင်ပို့ရောင်းချမှုပုံမှန်အားဖြင့်ပေးပို့ဘို့ 3-4 ရက်ပတ်လုံးယူနှင့်အွန်လိုင်းလမ်းတိုင်းခြေလှမ်းခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။ ချောထုပ်အပြည့်အဝအာမခံဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးကလက်မှတ်ပေးအပ်ခြင်းအပျေါ၌လိုအပ်ပါသည်။ ပေးပို့အများဆုံးနိုင်ငံများအတွက်သောကြာနေ့မှတနင်္လာဖြစ်ကြ၏။ (ယူအေအီး, ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်ကူဝိတ် မှလွဲ. ) ဘယ်သူမျှမကစာတိုက်သေတ္တာများ, APO သို့မဟုတ် FPO လိပ်စာများကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မှတ်စု: သင်တစ်ဦး '' ဖိုင်ပေါ်တွင်လက်မှတ် '' ရှိပါက, ဒီခွင့်ပြုချက်ပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့ EMS ခေါ်ပါ။ တစ်ဦး '' ဖိုင်ပေါ်တွင်လက်မှတ် '' ကြောင့်တစ်ဦးလက်မှတ်မပါဘဲကယ်နှုတ်သော packages ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာမခံတင်သင်္ဘောဖြင့်ဖုံးလွှမ်းမရနိုင်ပါ။
စံ Registered မေးလ် - အမေရိကန်ဒေါ်လာ 6.99
ကျနော်တို့ 120 နိုင်ငံပေါင်းကျော်ရန်မှတ်ပုံတင်ထားသောလကွောငျးစာပို့ဆက်ကပ်။ မှတ်ပုံတင်ထားသောမေးလ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 200 မှတက်ဘို့အာမခံထားသည်။ တင်ပို့ရောင်းချမှု 10-21 အလုပ်လုပ်ရက်ပတ်လုံးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ယူ. ပေးပို့အပေါ်သို့လက်မှတ်လိုအပ်သည်။ တနင်္ဂနွေမပေးပို့ရှိပါတယ်။
'' ရရှိနိုင်ပါ '' အဖြစ်ပြသအားလုံးကျောက်မျက်စတော့ရှယ်ယာနှင့်ချက်ချင်းသင်္ဘောများအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ၌ရှိကြ၏။ အမိန့်တနင်္လာနေ့အလုပ်လုပ်ကိုင်သောနေ့ရက် 1 အတွင်းလုပ်ငန်းများ၌ကြသည် - သောကြာနေ့ (ခမာအားလပ်ရက်ဖယ်ထုတ်ပြီး) ။
က Non-USA သို့တင်ပို့ရောင်းချမှုများအတွက်အပိုဆောင်းပြန်ကြားရေး
နိုင်ငံအများအပြား (မ USA) ခုနှစ်တွင်စနစ်တကျတင်ပို့ရောင်းချမှုအကောက်ခွန်စွဲချက်နှင့်အခွန်မှဘာသာရပ်များမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်ထားသောမေးလ်ပိုရှည်ကြာပေမယ့်ပုံမှန်အားဖြင့်အပိုဆောင်းကြေးရှောင်နေကြတယ်။ ကျနော်တို့ EMS အားဖြင့်တင်ပို့ပျော်ရွှင်သော်လည်း, ငါတို့သည်သင်တို့၏တိုင်းပြည်အတွင်းပေါ်ပေါက်စေခြင်းငှါအပိုစွဲချက်မထိန်းချုပ်ရှိသည်သောမှတ်သားပါ။
မှတ်စု: သွင်းကုန်အခွန်သို့မဟုတ်တာဝန်ဝယ်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ သောကွောငျ့ဒီလိုစွဲချက်၏ငြင်းဆန်ခဲ့သည်ဖြစ်ကြောင်းပြန်လာသောတင်ပို့ရောင်းချမှုကိုလက်ခံလို့မရပါ။ သငျသညျမဆိုအထူးအစီအမံလိုအပ်မယ်ဆိုရင်သင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။
GEMIC ဓာတ်ခွဲခန်းကနေအားလုံး packages များတစ်ဦးပြီးပြည့်စုံငွေတောင်းခံလွှာများပါဝင်သည်။ ကျေးဇူးပြု ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ သင့်ရဲ့အမိန့်အားမရရှေ့မှာသင့်တဲ့စိတ်ကြိုက်ငွေတောင်းခံလွှာသို့မဟုတ်မှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမငွေတောင်းခံလွှာကိုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်။
AED: အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု dirham (د.إ) AFN: အာဖဂန်အာဖဂန် (؋) အားလုံး: လျဘေးနီးယနျး lek (L) AMD ၏: Armenian အဘိဓါန် DRAM (AMD ၏) Ang: နယ်သာလန် Antillean guilder (ƒ) AOA: အင်ဂိုလာ kwanza (Kz) ARS: အာဂျင်တီးနားပီဆို ($) AUD: သြစတြေးလျဒေါ်လာ ($) AWG: Aruban florin (AFL) ။ AZN: Azerbaijani အဘိဓါန် manat (AZN) Bam: ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားပြောင်းအမှတ်အသား (KM) BBD: Barbadian ဒေါ်လာစျေး ($) BDT: ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် taka (৳) BGN: ဘူဂေးရီးယား lev (лв။ ) Bhd: ဘာရိန်း dinar (.د.ب) BIF: Burundian ဖရန့် (Fr) BMD: Bermudian ဒေါ်လာစျေး ($) BND: ဘရူနိုင်းဒေါ်လာ ($) Bob: ဘိုလီးဗီးယား boliviano (BS) ။ BRL: ဘရာဇီးအစစ်အမှန် (R $) BSD: Bahamian ဒေါ်လာစျေး ($) BTC: Bitcoin (฿) BTN: ဘူတန် ngultrum (နု) ။ BWP: ဘော့ဆွာနာ pula (P), BYN: ဘီလာရုရူဘယ် (Br) BZD: ဘေလီဇ်ဒေါ်လာ ($) CAD: ကနေဒါဒေါ်လာ (ကို C $) CDF: ကွန်ဂိုဖရန့် (Fr) CHF: ဆွစ်ဇာလန်ပြင်သစ်က (CHF) CLP: ချီလီပီဆို ($) CNY: တရုတ်ယွမ် (¥) ရဲ: ကိုလံဘီယာပီဆို ($) စီအာစီ: ကော်စတာကန် colon (₡) CUC: ကျူးဘားပြောင်းပီဆို ($) CUP: ကျူးဘားပီဆို ($) CVE: ကိပ်ဗာဒီအန် escudo ($) CZK: ချက် koruna (KC) DJF: Djiboutian ဖရန့် (Fr) DKK: ဒိန်းမတ်ခရိုဏာ (DKK) DOP: ဒိုမီနီကန်ပီဆို (RD $) DZD: အယ်လ်ဂျီးရီးယား dinar (د.ج) EGP: အီဂျစ်ပေါင် (EGP) ERN: အီရီထရီးယား nakfa (Nfk) ETB: အဲသယောပိ birr (Br) EUR: ယူရို (€) FJD: ဖီဒေါ်လာစျေး ($) FKP: ဖောက်ကလန်ကျွန်းစုပေါင် (£) GBP: ပေါင်စတာလင် (£) gel: ဂျြောဂြီယနျ lari (₾) GGP: ဂါဇီးပေါင် (£) GHS: ဂါနာ cedi (₵) GIP: ဂျီဘရောလ်ပေါင် (£) GMD: Gambian dalasi (ဃ) GNF: ဂီနီဖရန့် (Fr) GTQ: ဂွာတီမာလာ quetzal (မေး) GYD: Guyanese ဒေါ်လာစျေး ($) HKD: ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ($) HNL: ဟွန်ဒူးရပ်စ် lempira (L) HRK:-Croatian Kuna အဘိဓါန် (KN) HTG: အီသခွားသီး (G) HUF: ဟနျဂရေီ forint (Ft) IDR: အင်ဒိုနီးရှားရူပီယာ (RP) ILS: အစ္စရေးသစ်ကိုကျပ် (₪) ကို IMP: Manx အဘိဓါန်ပေါင် (£) INR: အိန္ဒိယရူပီး (₹) IQD: အီရတ် dinar (ع.د) IRR: အီရန် rial (﷼) ISK: လန်króna (Kr ။ ) JEP: ဂျာစီတစ်ပေါင် (£) JMD: Jamaican ဒေါ်လာစျေး ($) JOD: ဂျော်ဒန် dinar (د.ا) JPY: ဂျပန်ယန်း (¥) KES: ကင်ညာရှီလင် (KSh) ကီလို: Kyrgyzstani som (сом) KHR: ကမ္ဘောဒီးယား riel (៛) KMF: Comorian ဖရန့် (Fr) KPW: မြောက်ကိုရီးယား (₩) အနိုင်ရ ဝမ်: တောင်ကိုရီးယား (₩) အနိုင်ရ KWD: ကူဝိတ် dinar (د.ك) KYD: ကေမန်ကျွန်းစုဒေါ်လာ ($) KZT: ခါဇက်စတန်တန်ကြေး (₸) Lak: လာအို Kip (₭) LBP: လက်ဘနွန်ပေါင် (ل.ل) LKR: သီရိလင်္ကာရူပီး (රු) LRD: လိုင်ဘေးရီးယားဒေါ်လာ ($) LSL: လီဆိုသို loti (L) LYD: လစ်ဗျား dinar (ل.د) MAD: အဘိဓါန် Moroccan dirham ( د.م. ) MDL: မော်လ်ဒိုဗာ leu (MDL) MGA: အာလာဂါစီ ariary (အာရ) MKD: စီဒိုနီယံ denar (ден) ကျပ်: ဗမာကျပ် (ကျပ်) mnt: လီးtögrög (₮) ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်: Macanese အဘိဓါန် pataca (P), MUR: Mauritian ရူပီး (₨) MVR: Maldivian rufiyaa (.ރ) MWK: မာလာဝီ kwacha (MK) MXN: မက္ကဆီကန်ပီဆို ($) MYR: မလေးရှားရင်းဂစ် (RM) MZN: မိုဇမ်ဘစ် metical (MT) NAD - နမီးဘီးယားဒေါ်လာ (N $) NGN: နိုင်ဂျီးရီးယား naira (₦) NIO: နီကာရာဂွါ Cordoba (ကို C $) NOK: နော်ဝေခရိုနာ (Kr) က NPR: နီပေါရူပီး (₨) NZD: နယူးဇီလန်ဒေါ်လာ ($) OMR: ကလည်းအိုမန် rial ( ر.ع. ) PAB: ပနားမား balboa (B / ။ ) PEN: Sol (S /) PGK: ပါပူဝါနယူးဂီနီ kina (K) PHP ကို: ဖိလစ်ပိုင်ပီဆို (₱) မလေးရှား: ပါကစ္စတန်ရူပီး (₨) PLN: ပိုလန်złoty (ZL) PYG: Paraguayan Guaraní (₲) QAR: ကာတာ riyal (ر.ق) RON: ရိုမေးနီးယား leu (Lei) RSD: ဆားဘီးယားဒိုင်နာ (рсд) RUB: ရုရှရူဘယ် (₽) RWF: ရဝမ်ဒါဖရန့် (Fr) SAR: ဆော်ဒီ riyal (ر.س) SBD: ဆော်လမွန်ကျွန်းစုဒေါ်လာ ($) SCR: Seychellois ရူပီး (₨) SDG: ဆူဒန်ပေါင် ( ج.س. ) SEK: ဆွီဒင်ခရိုနာ (Kr) စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန်: စင်္ကာပူဒေါ်လာ ($) SHP: စိန့်ဟယ်လီနာပေါင် (£) SLL: Sierra Leonean Leone (Le) အရေးပေါ်: ဆိုမာလီရှီလင် (SH) SRD: Surinamese ဒေါ်လာစျေး ($) SYP: ဆီးရီးယားပေါင် (ل.س) SZL: Swazi lilangeni (L) THB: ထိုင်းဘတ်ငွေ (฿) TJS: Tajikistani somoni (ЅМ) TMT: တာ့ခ်မင်နစ္စတန် manat (ဍ) TND: တူနီးရှား dinar (د.ت) TOP: တှနျဂါ pa'anga (T က $) စမ်းကြည့်ပါ: တူရကီလိုင်ရာ (₺) TTD: ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုဒေါ်လာစျေး ($) TWD: နယူးထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ (NT $) TZS: တန်ဇန်းနီးယားရှီလင် (SH) uah: ယူကရိန်း hryvnia (₴) UGX: ယူဂန်ဒါရှီလင် (UGX) အမေရိကန်ဒေါ်လာ: ယူနိုက်တက်စတိတ် (ယူအက်စ်) ဒေါ်လာ ($) UYU: ဥရုဂွေးပီဆို ($) UZS: ဥဇဘက်ကစ္စမန်း (UZS) VEF: ဗင်နီဇွဲလား Bolivar (BS က F) VND: ဗီယက်နမ်đồng (₫) VUV: ဗာနူအာ vatu (VT) WST: Samoan အဘိဓါန် Tala (T) ကို XAF: ဗဟိုအာဖရိက CFA ဖရန့် (CFA) XCD: အရှေ့ကာရစ်ဘီယံဒေါ်လာ ($) XOF: အနောက်အာဖရိက CFA ဖရန့် (CFA) XPF: CFP ဖရန့် (Fr) YER: ယီမင် rial (﷼) Zar: တောင်အာဖရိကကျပန်း (R) ZMW: ဇမျဘီယာ kwacha (ZK)
အတူ login Facebook က အတူ login Google